Mmeghe Semalt Ihe kacha mma Weebụ Web Crawler Iji wepụ weebụsaịtị
Ịgbagharị weebụ, nke a na-ewerekarị dị ka ntanetị weebụ, bụ usoro mgbe otu edemede ma ọ bụ usoro ihe nchọgharị na-eme nchọgharị na netwọk na n'ụzọ zuru ezu, na-elekwasị anya na data ọhụrụ na nke dị ugbu a. Ọtụtụ mgbe, ihe ọmụma anyị chọrọ ka ejidere n'ime blog ma ọ bụ weebụsaịtị. Mgbe ụfọdụ saịtị na-agbasi mbọ ike ịkọwa data na nhazi, ahazi na nke dị ọcha, ọtụtụ n'ime ha anaghị eme otú ahụ - cheap dedicated server windows. Ịgba nsị data, nhazi, nchapu, na nhicha dị mkpa maka azụmahịa n'ịntanetị. Ị ga-anakọta ozi site na ọtụtụ isi mmalite ma chekwaa ya na ọdụ data nke ụlọ ahịa maka atụmatụ achụmnta ego. N'oge na-adịghị anya, ị ga-agafe na ụlọ ọrụ weebụ na obodo iji nweta ohere maka mmemme, usoro, na ngwanrọ dị iche iche iji nweta data site na saịtị.
Cyotek WebCopy bụ otu n'ime ndị na-enyocha weebụ na crawlers na ịntanetị. A maara ya maka ntanetị weebụ ya, nke nwere mmasị na onye ọrụ ya na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ileba anya na ọkpụkpụ azụ. Ọzọkwa, usoro a nwere ike ịnwepụta ihe ma na-abịa na ọtụtụ backbas databases. A makwaara ya maka ozi ọdụm ya na nkwado ya. Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịchọta ngwa ngwa ibe weebụ, webwrits weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ site na afọ ma rụọ ọrụ dị iche iche maka gị. Cyotek WebCopy chọrọ naanị abụọ na atọ clicks iji nweta ọrụ gị ma nwee ike ịgbaji data gị ngwa ngwa. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a na-ekesa usoro na ọtụtụ crawlers na-arụ ọrụ ozugbo. Akara Apache 2 nyere ya ikike ma GitHub mepụtara ya..
HTTrack bụ ọmarịcha ụlọ akwụkwọ ọmarịcha nke a na-ewu gburugburu ụlọ akwụkwọ ọmarịcha akwụkwọ HTML, nke aha ya bụ Mara Mma. Ọ bụrụ na ị na-eche na ntanetị weebụ gị kwesịrị ịdị mfe ma bụrụ ihe pụrụ iche, ị ga-anwale usoro ihe omume a ozugbo enwere ike. Ọ ga-eme ka usoro nsị ahụ dịkwuo mfe. Naanị ihe ị ga-eme bụ pịa bọọdụ ole na ole ma banye URL nke ọchịchọ. HttTrack nwere ikikere n'okpuru ikikere MIT.
Octoparse bụ ike ngwá ọrụ weebụ nke na-akwado obodo nke ndị mmepe weebụ ma nyere gị aka ịzụlite azụmahịa gị n'ụzọ dị mfe. Ọzọkwa, ọ nwere ike mbupụ ụdị ụdị data niile, nakọta ma chekwaa ha na ọtụtụ usoro dị ka CSV na JSON. O nwekwara ihe mgbakwunyere ole na ole ma ọ bụ ndabara maka ọrụ ndị metụtara njikwa kuki, ndị na-ahụ maka ndị ọrụ ọrụ, ma gbochie crawlers. Octoparse na-enye ohere ịnweta API ya iji wuo mgbakwunye gị.
Ọ bụrụ na ị naghị enwe nsogbu na mmemme ndị a n'ihi nsogbu nsogbu ha, ị nwere ike ịnwale Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser, na ngwaọrụ ndị ọzọ. N'ụzọ ọ bụla, Getleft bụ ngwaọrụ ọzọ dị ike na ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ. Iji ya, ịkwesighi ka ị bụrụ ọkachamara nke koodu PHP na HTML. Ngwaọrụ a ga-eme ka usoro ntanetị weebụ gị dị mfe na ngwa ngwa karịa mmemme ọdịnala ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ihe nchọgharị na site na obere XPaths ma na-akọwa URL iji mee ka ha daa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Mgbe ụfọdụ ngwá ọrụ a nwere ike itinye aka na usoro mmemme nke ụdị ya.